रामेश्वरभन्दा सुनिता तेब्बर मतले अगाडि, कसको कति ? – Annapurna Post News
May 17, 2022 sujaLeaveaComment on रामेश्वरभन्दा सुनिता तेब्बर मतले अगाडि, कसको कति ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर सुनिता डंगोलले ७ हजार ८३० मत प्राप्त गरेकी छन्। उनका प्रतिद्धन्दी गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले २ हजार २२० मत पाएका छन्। सुनिताले ५ हजार ६१० मतले लिड गरेकी छन्। सुनिता एमाले बाट काठमाण्डौ महानगरपालिकाको उपमेयरमा लडेकी छिन् ।
काठमाडौंमा वडा नम्बर १ र २ मा गणना सकिएको छ। दुबै वडाको अध्यक्षमा एमाले विजयी भएको छ ।अहिले वडा नम्बर ३, ४, ५, ६, ३१ र ३२ को गणना भइरहेको छ।
ललितपुरमा हरिकृष्णभन्दा चिरीबाबु तेब्बर मतले अगाडि-ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन झन्डै तेब्बर मतले अग्रता लिएका छन् । महर्जनले ५ हजार ९ सय ८४ मत प्राप्त गर्दा उनलाई पच्छ्याइरहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार हरिकृष्ण व्यन्जनकारले २ हजार २ सय २० मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै उपमेयरमा एमालेकी मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले अग्रता लिएकी छिन् । बज्राचार्यले २ हजार ६ सय ५६ मत प्राप्त गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराजा बज्राचार्य १ हजार ९ सय ६७ मत ल्याएर पच्छ्याइरहेका छन् । कांग्रेसको उम्मेदवारविहीन उपमेयर पदको रूख चिह्नमा समेत मतदान गरेको पाइएको छ। उपमेयर पद गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीको भागमा परेको थियो।
विराटनगरमा निकै अघि बढे नागेश-विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइरालाले आफ्नो अग्रता बढाएका छन्। जारी पछिल्लो मतगणनाअनुसार कोइरालाले ७ हजार १ सय २५ मत ल्याइ प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका सागर थापासँगको दुरीमा १७ सय १९ मतको अग्रता कायम राखेका छन्। थापाले ५ हजार ४ सय ६ मत पाएका छन् ।
यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवार उमेश यादवले २ हजार ४ सय ६१ मत ल्याएका छन् । महानगरपालिकाको उपमेयरमा एमालेकी शिल्पा कार्कीले अग्रता कायम राखेकी छन् । उनले ६ हजार १ सय ७७ मत ल्याउँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी जनता समाजवादी पार्टीका अरमेन्द्र यादवले ४ हजार ७७ मत पाएका छन् ।
भरतपुरमा रोकिएको मतगणना फेरि सुरु
रघुवीर र जुली महतोले मेरो चरित्र हत्या गरेः अध्यक्ष अन्सारी